ဂျပန်လို အင်အင်းပါနည်း လမ်းညွှန် - Neo Mars International
ဂျပန်လို အင်အင်းပါနည်း လမ်းညွှန်
November 7, 2021 May 10, 2022 by adminin Articles, Knowledge
အင်တာနက်ထဲက တစ်နေရာရာမှာတော့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အိမ်သာတွေအကြောင်းကို ဖတ်မိဖူး၊ မြင်မိဖူးကြမှာပါ။
ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်း ဂျပန်နိုင်ငံကို ခြေချလို့ အရေးကြုံလာပြီဆိုရင် ဘယ်လောက်ပဲ ဖတ်ထား၊ ဖတ်ထား လက်တွေ့အသုံးမပြုဖူးသေးရင် အခက်ကြုံလာရမှာတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးလေးထဲမှာတော့ ဂျပန်မှာ ကိစ္စကြီးငယ်ကို ဝမ်းမလွယ်ထားပဲ ဘယ်လို ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာနဲ့ အရေးကြုံရင် သက်လုံကောင်းကြစေဖို့ ဖေါ်ပြပေးသွားမှာပါ။
အများသုံး ‌အိမ်သာတစ်ခုမှ ခလုတ်များ
ဆိုကြပါစို့။ ကိုယ့်အနေနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံထဲကို ရောက်ရှိ ခြေချလိုက်ပါပြီ။ ခြေချပြီး မကြာပါဘူး။ အရင်ဆုံးလုပ်ကြမှာကတော့ အိမ်သာကို ပြေးကြမှာပါ။
ဂျပန်မှာ အိမ်သာတွေ ပေါပေါများများကို ရှိပါတယ်။ အခကြေးငွေလည်း ပေးစရာမလိုသလို သပ်ယပ်သန့်ရှင်းကြပါတယ်။ အများသောအားဖြင့် လေဆိပ်တွေ၊ စျေးဝယ်စင်တာကြီးတွေ၊ ပြခန်းတွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ စတိုးဆိုင်လေးတွေမှာ အိမ်သာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ပန်းခြံတွေနဲ့ အခြား အများပြည်သူနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ နေရာတွေမှာလည်း အိမ်သာဟာ လက်တစ်ကမ်း၊ ခြေတစ်ကမ်း အကွာတွေမှာ ခပ်စိပ်စိပ်တည်ရှိပါတယ်။
Congratulations for Tiolet Course!
အဝေးပြေး ရထားတွေနဲ့၊ ဘတ်စ်ကားတွေပေါ်မှာ အိမ်သာ ပါရှိပေမယ့် တချို့ ခရီးတိုလေးတွေဆွဲတဲ့ မြို့တွင်းပြေး ဘတ်စ်ကားတွေနဲ့ ရထားလိုင်းအချို့မှာတော့ အိမ်သာမပါပါဘူး။ (ဘူတာတွေမှာ အိမ်သာရှိပါတယ်။)
နိုင်ငံခြားသား ခရီးသည်တွေ စုပြုံအသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့နေရာတွေက အိမ်သာတွေကတော့ သန့်ရှင်းမှုပိုင်းမှာ အနည်းငယ် အားနည်းချက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ ဂျပန်နိုင်ငံက အိမ်သာတွေဟာ အလွန်ကောင်းမွန်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မသန်စွမ်းသူများအတွက် barrier-free အိမ်သာတွေကို နိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာ လွယ်လင့်တကူတွေ့ကြရမှာပါ။ (ဂျပန်နိုင်ငံဟာ သူ့ရဲ့ ပို့ဆောင်ဆက််သွယ်‌ရေး အခက်အလက်အတော်များများကို barrier-free ပြုလုပ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။)
တကယ်လို့ ကိုယ်ဟာ Mitsukoshi ဆိုတဲ့ ဂျပန်စျေးဝယ်စင်တာကြီး တစ်ခုကို ရောက်နေတယ်ဆိုပါစို့။ စျေးပတ်ဝယ်တာလည်း ပြီးသလောက်ရှိပြီ။ လျှောက်ကြည့်လို့လည်း ဝပြီ။
ဂျပန်နိုင်ငံ အိမ်သာတစ်ခုရဲ့ အဝင် (Source: MIKI Yoshihito)
ဆူရှီဆိုင်မှာ ဆူရှီတွေစားနေရင်းကနေ ရေဆာဆာနဲ့ သောက်ခဲ့တဲ့ ရေနွေးကြမ်း ခြောက်ခွက်လောက်ကလည်း အစွမ်းပြလာပြီဆိုပါတော့။ အဲဒီမှာ အိမ်သာနဲ့ တူမယ့် အရိပ်အယောာင်တွေကို လိုက်ရှာရတော့မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်က ချက်ချင်းကြီးရှာလို့ မတွေ့သေးဘူးဆိုရင်တော့ တစ်ယောက်ယောက်ကို အောက်ပါအတိုင်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Excuse me. Where is the restroom?
တဆိတ်လောက်… အိမ်သာ ဘယ်မှာပါလဲ?
ဂျပန်လို Toilet ကို “Toire” လို့ ခေါ်ရုံနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ဂျပန်လူမျိုးတွေက အိမ်သာကို အခြားစကားလုံးတွေနဲ့ ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ မြန်မာစကားမှာ အိမ်သာ၊ သန့်စင်ခန်း၊ ရေအိမ်၊ နောက်ဖေး စသဖြင့် ခေါ်ဝေါ်တာတွေ ကွဲကြသလိုမျိုးပါ။
ဂျပန်လို အိမ်သာကို “otearai”၊ “keshoushitsu”၊ “benjo” စသဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ကြပါသေးတယ်။ ကိုယ်က “Toire” လို့ မေးနေမိပြီး ကိုယ့်ကို ပြန်ဖြေတဲ့သူတွေက အထက်ပါ အခေါ်အဝေါ်တွေနဲ့ ပြန်ဖြေတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အိမ်သာကို တွေ့ပြီဆိုရင်တော့ တုံ့ဆိုင်းမနေပါနဲ့တော့။ စိတ်အေးချမ်းသာစွာနဲ့ ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
ဖိနပ်စီးရမှာလား၊ ချွတ်ရမှာလားလည်း ပူမနေပါနဲ့။ အများသုံးအိမ်သာအများအပြားမှာ ကိုယ်စီးလာတဲ့ ဖိနပ်နဲ့ပဲ ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
အိမ်သာအဝင် ဆိုင်းဘုတ်များ (Source: Kuruman)
ကိုယ်က ရေပူစမ်းတစ်ခုခုက အိမ်သာကို အသုံးပြုမယ်၊ ဒါမှ မဟုတ် ဂျပ်စတိုင် Inn တစ်ခုခုမှာဆိုရင်တော့ ဖိနပ်ချွတ်ပြီး အိမ်သာသုံး ခြေညှပ်ဖိနပ်ကို လဲရတာမျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။
အထင်ရှားဆုံးကတော့ အိမ်သာအဝင်ဝမှာ ခြေညှပ်ဖိနပ်လေးတွေ စီထားတာမျိုးဆိုရင်တော့ ဖိနပ်ချွတ်ပြီး ခြေညှပ်ဖိနပ်ကို လဲစီးရမှာပါ။ ခြေညှပ်ဖိနပ်တွေကို မတွေ့မိဘူးဆိုရင်တော့ ကိုယ်စီးလာတဲ့ ဖိနပ်နဲ့တင်ပဲ ချွတ်စရာမလိုပဲ အဆင်ပြေပါတယ်။
အိမ်သာထဲမှာတော့ အနောက်တိုင်းပုံစံ ဘိုထိုင် အိမ်သာတွေအပြင်၊ ဂျပန်ရိုးရာ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ရတဲ့ အိမ်သာမျိုးတွေကိုလည်း ကြုံကြမှာပါ။
ဂျပန်ရိုးရာ အိမ်သာတွေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်သာအများအပြားနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး ကိစ္စရှင်းရတာပါ။ အနောက်နိုင်ငံသားတွေအတွက်ကတော့ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ကြဖို့ ခက်ပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ကတော့ အဆင်ပြေနိုင်မှာပါ။
ဒါပေမယ့် ပုံစံအဆန်းလေးမို့ ထိုင်တဲ့အခါ ဘယ်ဘက်ကို မျက်နှာမူရမလဲဆိုတာကို တွေဝေသွားနိုင်ပါတယ်။ အဖုံးပါတဲ့ ဘက်ကို ချိန်ပြီး ထိုင်ပါ။ အောက်က ပုံလေးကို ကြည့်ပါ။
ဂျပန်ရိုးရာ အိမ်သာလမ်းညွှန် (Source: Yuya Tamai)
အဖုံးနေရာလေးက တကယ်က အရေးကြီးပါတယ်။ တကယ်က အရှိန်နဲ့ ထွက်လာမှာတွေကို တားဆီးပေးပြီး မညစ်ပေကုန်ရအောင် ကာကွယ်ပေးထားတာပါ။ တခါတလေမှာ ဒူးနား၊ ခါးနာရှိတဲ့ သူတွေ ထိုင်တဲ့ အခါမှာ အားပြုပြီး ကိုင်လို့ရအောင် လက်ရန်းတွေပါ တပ်ဆင်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ ကိစ္စပြီးရင်တော့ ရေဆွဲချလို့ ရပါပြီ။ (မမေ့ပါနဲ့။)
ဂျပန်ရိုးရာ အိမ်သာတစ်ခုကို တွေ့မြင်ရစဥ် (Source: Timothy Takemoto)
ဒါ‌‌ပေမယ့် ယနေ့ခေတ်ဂျပန်မှာ လူသုံးများလာတာကတော့ အနောက်တိုင်းစတိုင် ဘိုထိုင် အိမ်သာတွေပါပဲ။ ဘိုထိုင်အိမ်သာတွေကို အကြမ်းဖျင်းအများအစားခွဲရင် ရိုးရိုးနဲ့ ရှယ်ဆိုပြီး ခွဲနိုင်ပါတယ်။ ရိုးရိုးအိမ်သာတွေကတော့ ဘာမှ အထွေအထူးမရှိပါဘူး။ ထိုင်မယ်၊ ကိစ္စရှင်းမယ်။ ဒါပါပဲ။ ရှယ်ကတော့ နည်းနည်း ကြိုသိထားရမှာလေးတွေ ရှိပါတယ်။
စဥ်းစားကြည့်ပါ။ ကိုယ်က ဗိုက်အရမ်းနာပြီး ကံကောင်းစွာနဲ့ အိမ်သာခန်းအလွတ်တစ်ခု နေရာရတယ်။ အဲဒီမှာ တံခါးလည်း ဖွင့်ကြည့်ရော မီးရောင်စုံလင်းနေတဲ့ ခလုတ် အခုနှစ်ဆယ်လောက် ဂျပန်လိုစာလုံး စိပ်စိပ်လေးတွေနဲ့ ရေးထားတဲ့ အိမ်သာခွက်တစ်ခုက စောင့်ကြိုနေမယ်ဆိုရင်၊ ခုမှ စအသုံးပြုမယ့် အတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့ သူတွေအတွက်ကတော့ အနည်းငယ် တွန့်သွားမှာပါပဲ။
ဂျပန် အဆင့်မြင့် ရှယ်အိမ်သာတစ်ခုမှ ခလုတ်များ (Source: Maya-Anaïs Yataghène)
ဘာမှတော့ ကြောက်စရာမလိုပါဘူး။ အောက်မှာ ရှယ်အိမ်သာတွေက ခလုပ်တွေမှာ ပါလေ့ရှိတဲ့ ဂျပန်စာလုံးလေးတွေကို အညွှန်းတွေနဲ့ ရေးပေးထားပါတယ်။
“ビデ” အိမ်သာခွက်ထဲက ရေပိုက်ခေါင်းလေးဟာ ဆေးဖို့ ပြူထွက်လာမှာပါ။
“おしり” ဆေးဖို့ရေပိုက်ခေါင်းလေးဟာ နောက်ဘက်ကို ချိန်ပြီး ပြူထွက်လာမှာပါ။
“水勢” ရေအား အပြင်းအပျော့ကိုချိန်ဖို့ပါ။
“音姫” တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်ရင် “အသံ မင်းသမီး” လို့ အဓိပ္ပာယ်ထွက်မှာပါ။ တကယ်တော့ အိမ်သာသွားနေတုန်း ပူပူပူးပူ အသံတွေကို အခြားသံတွေနဲ့ ဖုံးကွယ်ပေးတာပါ။
“止” လုပ်ဆောင်ချက် အကုန်လုံးကို ရပ်ပေးပါတယ်။
“乾燥” အခြောက်ခံ လေမှုတ်စက်ပါ။
“強” ရေအားပြင်းအောင် လုပ်ပေးပါတယ်။
“弱” ရေအားပျော့အောင် လုပ်ပေးပါတယ်။
“ノズル” ရေပန်းရဲ့ နော်ဇယ်ခေါင်းပါ။ ‌ရေမွှားလေးတွေလား? ရေစူးစူးနဲ့ ပြင်းပြင်းပြင်းပြောင်ပြောင်ထိုးမှာလား? ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
“前” ရေပန်း နော်ဇယ်ခေါင်းကို ရှေ့နည်းနည်း ချိန်ပေးပါတယ်။
“後” ရေပန်း နော်ဇယ်ခေါင်းကို နောက်နည်းနည်း ချိန်ပေးပါတယ်။
“脱臭” အနံဆိုးစုပ်ယူရှင်းလင်းပေးတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ပါ။
“暖房便座” ကြမ်းတမ်းတဲ့ ဆောင်းဒဏ်ကို အံတုဖို့ ထိုင်ခုံကို အနွေးဓာတ်ပေးပါတယ်။
“マッサージ” ညောင်းညာနေတဲ့ တင်ပါးကို နှိပ်နယ်ပေးပါတယ်။ မာဆတ်လို့ ‌ရေးထားတာပါ။
“流す” ရေဆွဲချတာပါ။ ဒါလေးကတော့ အရေးကြီးပါတယ်။
“準備中” Power saving mode ကို ပြောင်းနေတာပါ။ တစ်နည်း အိမ်သာလေးက ခဏအနားယူနေတာပါ။ သုံးမယ့်သူလာရင်တော့ နှိုးထပြီး အဆင်သင့်ဖြစ်ပေးရမှာပါ။
ဗိုက်နာတာလည်း ပျောက်သွားပြီ၊ အောက်ကထိုးထွက်လာတဲ့ ရေပန်းလေးကိုလည်း သုံးပြီးပြီ၊ ထိုင်ခုံက အခြောက်ခံစက်နဲ့လည်း ရေတွေခြောက်အောင် လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ နောက်ဆုံးတစ်ခု အရေးကြီးတာ ကျန်ပါသေးတယ်။ ရေဆွဲချဖို့ပါ။
ဘေးက ခလုတ်တွေကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ ရုတ်တရက်ဆိုသလို ရေဆွဲချမယ့် ခလုတ်ကို ရှာမတွေ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ရင်ခုန်သံတွေ မြန်လာပါပြီ။ အရမ်း မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဦး။ ရေဆွဲချတဲ့ ခလုတ်ရှာမတွေ့ရင် မတ်တပ်ရပ်ကြည့်ပါ။ အော်တိုအာရုံခံစနစ်တွေနဲ့ အလိုအလျောက်ရေဆွဲချပေးတဲ့ စနစ်ပါနေတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဘိုထိုင်အိမ်သာ ရိုးရိုး (Source: perke)
တကယ်က ဘယ်လို ရှယ်အိမ်သာမျိုးတွေပဲ ဖြစ်ပါစေ လက်တစ်ကမ်းအကွာမှာ အလိုအလျောက်မဟုတ်ပဲ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ရွေဆွဲချနိုင်တဲ့ ခလုတ်ပါလေ့ရှိပါတယ်။ တခါတလေကျရင် မထင်မှတ်ထားတဲ့ နေရာလေးတွေမှာပါ။ အနောက်မှာ ပါနေတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။
တကယ်လို့မှ ရေဆွဲချဖို့ ခလုတ်ရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ နည်းနည်း အန္တရာယ်များတဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ ကိုယ်မနှိပ်ရသေးတဲ့ ခလုတ်တွေကို စမ်းနှိပ်ကြည့်တာပါပဲ။ ဒါကိုတော့ ရေဆွဲချတဲ့ ခလုတ်ရှာမတွေ့လို့ လုံးဝ ကြံရာမရဖြစ်နေပြီဆိုမှသာ လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Medical Emergency အတွက် တစ်ယောက်ယောက်ကို အကူအညီခေါ်ဖို့ ခလုတ်ပါနေတတ်လို့ပါ။ တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့်အိမ်သာတံခါးကို လာကူညီဖွင့်ပေးဖို့ ကြိုးစားတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ရေဆွဲချပြီးပြီဆိုရင် နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ လက်ဆေးရမှာပါ။ ဒါကတော့ ဘယ်နိုင်ငံကိုပဲ သွားသွား လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ အိမ်သုံးအိမ်သာလေးတွေမှာတော့ နောက်ဘက်မှာ‌ ရေဆွဲချပြီးတာနဲ့ ရေပြန်ကျတဲ့ ပိုက်‌ခေါင်းအသေးလေး ရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲတာက တကယ်တော့ လက်ဆေးဖို့ပါ။ ကျန်တဲ့ အများသုံးအိမ်သာတွေမှာတော့ လက်ဆေးဖို့နေရာကို ကျကျနနလုပ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။
ခုလို လက်ဆေးဖို့ တပါတည်း ရေပါချွေတာတဲ့ အိမ်သာမျိုးကို (၁၉၅၆) ခုနှစ်ကတည်းက ဂျပန်တွေ စတီထွင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
တချို့ လက်ဆေးဖို့ ဘေစင်တွေက ရေပိုက်ခေါင်းတွေမှာ လှည့်ဖွင့်ဖို့ ဘား မပါပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ လက်ကို ‌ရေပိုက်ခေါင်းနား ဝှေ့ယမ်းမှသာ ရေထွက်ကျလာအောင် ဆင်ဆာ တပ်ထားတာမျိုးပါ။ ဆပ်ပြာကိုလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင် လက်သုတ်ဖို့ တစ်ရှူးစက္ကူအကြမ်း အရွက်တွေ ရှိသလို တချို့ကျတော့ လက်ကို လေမှုတ်စက်နဲ့ အခြောက်ခံဖို့ပဲ ထားပေးထားပါတယ်။
အိမ်သာသုံး တစ်ရှူးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတိပေးရရင်တော့ ဂျပန်အိမ်သာသုံး စက္ကူတွေဟာ အတော် ပါးလွှာပါတယ်။ အနည်းဆုံး သုံး‌ခေါက်လောက် လိပ်ပြီး အသုံးပြုမှသာ အိပ်မက်ဆိုးတွေ မကြုံရမှာပါ။
ဂျပန်မှာ အိမ်သာတွေကို ဘယ်လို အသုံးပြုရမလဲဆိုတာကို သိသွားကြလောက်ပြီထင်ပါတယ်။
အနောက်တိုင်း စတိုင် ဘိုထိုင် ထိုင်နည်း အမှန် (Source: Yuya Tamai)
ဂျပန်အိမ်သာတွေ ဘယ်လိုပုံစံတွေလဲဆိုတာကို အောက်က ဗီဒီယိုတွေကို ဆက်ကြည့်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဒီအောက်က ဗီဒီယိုလေးကတော့ အိမ်သာပုံစံ ကလေးကစားစရာလေးပါ။ ချစ်စရာလေးပါ။
နိဂုံးချုပ်ရရင်တော့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အိမ်သာကို အလေးထားပြီး သန့်ရှင်းရေးအတွက်သာမက အခြားအဆင်ပြေအောင် မျိုးစုံကို အသစ်အဆန်းထွင်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ကိစ္စကြီးငယ်ကို ချက်ချင်းထောက်လှန်းပြီး ရောဂါတစ်မျိုးမျိုးအတွက် ရှေ့ပြေးနိမိတ်ရှိမရှိကို ဖေါ်ပြပေးတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ၊ ဇိမ်ခံ အိမ်သာတွေ စသဖြင့် အမျိုးစုံရှိပါတယ်။
တကယ်လို့ ကိုယ်သာ တိုကျိုမှာရှိနေတယ်ဆိုရင် ရှင်ဂျုကုမှာရှိတဲ့ Toto Showroom ကို သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ တကယ့်ကို နည်းပညာမြင့် ကိုယ်မမြင်ဖူးတဲ့ တီထွင်မှုတွေနဲ့ အိမ်သာတွေကို မြင်ရမှာပါ။
Toto ဆိုတာကတော့ ဂျပန်ရဲ့ အိမ်သာ နည်းပညာမှာ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းဝင်တဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်သလို အိမ်သာအညစ်အကြေးတွေကနေ ထွက်တဲ့ Bio Gas ကနေ မောင်းနှင်နိုင်တဲ့ ဆိုင်ကယ်ကိုလည်း ထွင်ခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အနောက်တိုင်းပုံစံ ဘိုထိုင်တွေမှာ တပ်တဲ့ “washlet” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုလည်း သူတို့အနေနဲ့ မူပိုင်ခွင့်ယူထားပါတယ်။ Toto ရဲ့ Showroom ထဲမှာတော့ အနာဂတ်ကမ္ဘာရဲ့ အိမ်သာတွေကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။
Next Postချောကလက် ယောကန်